Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကို - Unlimited အရာအားလုံး Get လုပ်နည်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကို - Unlimited အရာအားလုံး Get လုပ်နည်း
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကို - Unlimited အရာအားလုံး APK ကို Get လုပ်နည်း
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရိုးရှင်းစွာသင်တစ်ဦးအချိန်တွင်2အခြားကစားသမားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်လာသောအခါန့်အသတ်ပျော်စရာဆောင်တတ်၏သော 11D လှုပ်ရှားမှု RPG multiplayer ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအခက်အခဲအဆင့်ဆင့်နှုန်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောကစား Modes သာရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းအလေ့အကျင့် mod နှင့်သင်၏ကိုယ်ပွား၏တန်ခိုးတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပွား ပို. ပင်အစွမ်းထက်အောင်ကွဲပြားခြားနားသောအင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်လက်နက်များရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်အွန်လိုင်းကစားစဉ်ဝင်ငွေနိုငျသောစစ်တိုက်မှတ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုယ်ပွား၏တန်ခိုးတိုးတက်စေရန်တစ်ဦးစတိုးဆိုင် option ကိုရှိပါတယ်။ Install Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကို ယခုကြီးစွာသောဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံန့်အသတ်အင်အားကြီးဝင်ရောက်ဖို့။ သင်အလွယ်တကူ $ 1 ကုန်ကျသောလိုလားတဲ့အထုပ် mod, တပ်ဆင်နိုင်သည်။
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Hack, သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks
သငျသညျ spawn ချင်ဘယ်မှာတပ်စခန်းမြေပုံနီးကပ်မိုင်း (အာရုံခံဗုံး) နှင့်အစိမ်းရောင်ဗုံး (ဓါတ်ငွေ့ဗုံးပစ်လောင်ချာ) ချန်ထားပါ။ အခြားကစားသမား respawn အသေသတ်ကြသောအခါ၎င်းသည်အပိုရမှတ်ပေးသည်။
တစ်ဦးပြိုင်ဘက်သင့်ရဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်လက်ပစ်ဗုံးပစ်လိုက်တဲ့အခါပြန်မသွားကြပါဘူး။ အဲဒီအစား, လက်ပစ်ဗုံးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရရှေ့ဆက်သွားပါ။
ပျံသန်းနေစဉ်, ပိုမိုမြန်ဆန်ပျံသန်းဖို့ Mele လက်နက်ကိုအသုံးပြုပါ။
mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်များ
RAM ကို - 1 GB အထိ
အထက်က Android 4.0 သို့မဟုတ်
60GB internal storage ကို
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကို Download လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါကြောင့်အမှားအယွင်းများ parsing ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြဖြစ်နိုင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအရင် hack ကဗားရှင်းဖယ်ရှားပါ။
RAM ကိုရှင်းလင်းဖို့အားလုံးကိုနောက်ခံ app များကိုပိတ်လိုက်ပါ။
အဆိုပါ Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် APK ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပြီး app ကို install လုပ်ပါ။
ဒါဟာ app ကိုအမည်မသိရင်းမြစ်များမှ install လုပ်ခွင့်ပြုပါရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။
ဒီ option ကို Enable နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်။
install လုပ်ပြီးနောက်, အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို turn off နှင့် app ကိုဖွင့်လှစ်။
app ကိုမှ device ကိုချိတ်ဆက်ပါနှင့်ဂိမ်းပျော်မွေ့။
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကို - Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ
Unlimited AMMO - ပိုပြီးဂိုးသွင်းဖို့ Unlimited ဗုံးများ, သေနတ်စသည်တို့ကိုခံစားပါ။
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Pro ကို Pack ကိုသော့ဖွင့် - အရာအားလုံးဝင်ရောက်ဖို့ဒီ mode ကိုနှင့်အတူအခမဲ့ Pro ကို Pack ကို Unlock ။
Unlimited NITRO - သင် nitro နှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုပျံသန်းနှင့်အချိန်အများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
Unlimited ကျန်းမာခြင်း - န့်အသတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူမည်သည့်ကြားဖြတ်မပါဘဲဂိမ်း Play ။
avatar စိတ်ကြိုက် - သင့်ကိုယ်ပွား Customize ကမမြင်ရတဲ့ပါစေ။ ဒါဟာအစအဖြစ်ကောင်းစွာနောက်ခံကိုပြောင်းလဲကူညီပေးသည်။
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်က Wall ကို Hack ဘဝတွေကိုကယ်တင်နှင့်နံရံဖုံးကွယ်ရန်။
ပိုပြီးအချက်များကိုဝင်ငွေနှင့်အချိန်ကိုကယ်တင် 7X မှမဆိုသေနတ်ချဲ့။
ငါတို့သည်သင်တို့ယောက်ျားတွေဒီလမ်းညွှန်ခံစားနှင့်ဤ Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကိုသငျသညျန့်အသတ်အရာအားလုံးပျော်မွေ့ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ က 90MB ထက်ပိုအာကာသမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်သည်မည်သည့် Android ကိရိယာပေါ်တွင်လွယ်ကူစွာဒီဂိမ်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သင်အလွယ်တကူသာ 1GB RAM ကိုနှင့်အတူကြံစည် Android ပေါ်မှာဒီဂိမ်းကို run နိုင်ပါတယ်။
Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် APK ကို Download လုပ်ပါ Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် APK ကို Install Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် APK ကို Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Mod APK ကို Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်သိကောင်းစရာများ Mini ကိုပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် Tricks